မျက်နှာအသားအရေကြည်လင်လှပစေဖို့ နည်းစနစ်ကောင်းများ - Pissaya News
မျက်နှာအသားအရေကြည်လင်လှပစေဖို့ အိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း လုပ်ပေးသင့်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် ၁. မိတ်ကပ်ဖျက်ခြင်း။
မျက်နှာအရေပြားထဲက cells လေးတွေဟာ ညဘက်မှာ ချွေးပေါက်တွေကို ဖွင့်ခြင်းဖြင့် လိုအပ်ချက်တွေကို ပြန်လည် ပြုပြင်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်တွေကို သေချာမဖျက်ပဲထားလိုက်ရင် ချွေးပေါက်လေးတွေမပွင့်နိုင်ပဲ အရေပြားပေါ်မှာ အစက်အပြောက်, အသားရေမညီညာခြင်းနဲ့ ဝက်ခြံတွေ ထွက်လာတတ်တယ်နော်။ အဲ့တာကြောင့် မိတ်ကပ်လူးပြီးရင်သေချာစင်ကြယ်အောင် ဖျက်သင့်ပါတယ်နော်။
အဆင့် ၂. Toner သုံးခြင်း။
Toner သုံးခြင်းဟာ မျက်နှာသစ်ပြီးကျန်ရှိတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကိုသန့်စင်ပေးရုံမက ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးခြင်း, ချွေးပေါက်ကျဉ်းအောင်လုပ်ပေးခြင်း, အဆိပ်အတောက်များ ဖယ်ရှားပေးခြင်း အစရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူး ရစေပါတယ်နော်။
အဆင့် ၃. Moisturizing Serumလူးခြင်း။
အသားခြောက်, အဆီပြန်, ပုံမှန်အသားရေ အစရှိတဲ့ ဘယ်အသားရေမဆို သင့်တော်တဲ့ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ moisturizing serum လေးကို သုံးပေးသင့်ပါတယ်နော်။ အသားရေကြည်ကြည်လေးနဲ့ အရေပြားကောင်းဖို့ အဓိကအချက်က အရေပြားမှာလိုအပ်တဲ့ ရေဓာတ်ပြည့်နေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် ၄. Night Repair Creamလူးခြင်း။
ညဘက်မှာ cells တွေပြုပြင်ပေးတဲ့ အဆင့်ကို အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တာလေးကတော့ night repair cream လေးလူးဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်နော်။
အဆင့် ၅. Eyes serum လူးခြင်း။
အသက်၂၀ ကျော်အရွယ်မှစပြီး (အသက်ကြီးအရွယ်ရောက် အသားရေပြောင်းလဲခြင်း) စတင်လာလို့ မျက်အိတ်ဖောင်းခြင်း၊ မျက်တွင်းကျခြင်း၊ မျက်လုံးနားတဝိုက် အရေးအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လားခြင်း တွေကို ကာကွယ်နိုင်အောင် Eyes Serum လေးလူးပေးသင့်တယ်နော်။ လူးတဲ့အခါမှာ မျက်လုံးအတွင်းဘက်ထောင့်မှ အပြင်ဘက်ထောင့်ကိုပဲ ဆွဲပြီး လူးပေးရမယ်နော်။
ဒီအဆင့်လေး ၅ ချက်ကိုနေ့တိုင်း ဂရုတစိုက်လေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် မျက်နှာအသားရေကြည်လင်ပြီး ကျန်းမာတဲ့အသားရေကို ထာဝစဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မကျြနှာအသားအရကွေညျလငျလှပစဖေို့ အိပျယာဝငျခါနီးတိုငျး လုပျပေးသငျ့တဲ့ နညျးလမျးလေးတှေ ဖွဈပါတယျ။
အဆငျ့ ၁. မိတျကပျဖကျြခွငျး။
မကျြနှာအရပွေားထဲက cells လေးတှဟော ညဘကျမှာ ခြှေးပေါကျတှကေို ဖှငျ့ခွငျးဖွငျ့ လိုအပျခကျြတှကေို ပွနျလညျ ပွုပွငျပါတယျ။ မိတျကပျတှကေို သခြောမဖကျြပဲထားလိုကျရငျ ခြှေးပေါကျလေးတှမေပှငျ့နိုငျပဲ အရပွေားပျေါမှာ အစကျအပွောကျ, အသားရမေညီညာခွငျးနဲ့ ဝကျခွံတှေ ထှကျလာတတျတယျနျော။ အဲ့တာကွောငျ့ မိတျကပျလူးပွီးရငျသခြောစငျကွယျအောငျ ဖကျြသငျ့ပါတယျနျော။
အဆငျ့ ၂. Toner သုံးခွငျး။
Toner သုံးခွငျးဟာ မကျြနှာသဈပွီးကနျြရှိတဲ့ အညဈအကွေးတှကေိုသနျ့စငျပေးရုံမက ရဓောတျဖွညျ့ပေးခွငျး, ခြှေးပေါကျကဉျြးအောငျလုပျပေးခွငျး, အဆိပျအတောကျမြား ဖယျရှားပေးခွငျး အစရှိတဲ့ အကြိုးကြေးဇူး ရစပေါတယျနျော။
အဆငျ့ ၃. Moisturizing Serumလူးခွငျး။
အသားခွောကျ, အဆီပွနျ, ပုံမှနျအသားရေ အစရှိတဲ့ ဘယျအသားရမေဆို သငျ့တျောတဲ့ ရဓောတျဖွညျ့ပေးတဲ့ moisturizing serum လေးကို သုံးပေးသငျ့ပါတယျနျော။ အသားရကွေညျကွညျလေးနဲ့ အရပွေားကောငျးဖို့ အဓိကအခကျြက အရပွေားမှာလိုအပျတဲ့ ရဓောတျပွညျ့နဖေို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
အဆငျ့ ၄. Night Repair Creamလူးခွငျး။
ညဘကျမှာ cells တှပွေုပွငျပေးတဲ့ အဆငျ့ကို အထောကျအကူပွုပေးနိုငျတာလေးကတော့ night repair cream လေးလူးဖို့လဲ လိုအပျပါတယျနျော။
အဆငျ့ ၅. Eyes serum လူးခွငျး။
အသကျ၂၀ ကြျောအရှယျမှစပွီး (အသကျကွီးအရှယျရောကျ အသားရပွေောငျးလဲခွငျး) စတငျလာလို့ မကျြအိတျဖောငျးခွငျး၊ မကျြတှငျးကခြွငျး၊ မကျြလုံးနားတဝိုကျ အရေးအကွောငျးဖွဈပျေါလားခွငျး တှကေို ကာကှယျနိုငျအောငျ Eyes Serum လေးလူးပေးသငျ့တယျနျော။ လူးတဲ့အခါမှာ မကျြလုံးအတှငျးဘကျထောငျ့မှ အပွငျဘကျထောငျ့ကိုပဲ ဆှဲပွီး လူးပေးရမယျနျော။
ဒီအဆငျ့လေး ၅ ခကျြကိုနတေို့ငျး ဂရုတစိုကျလေးလုပျပေးမယျဆိုရငျ မကျြနှာအသားရကွေညျလငျပွီး ကနျြးမာတဲ့အသားရကေို ထာဝစဉျပိုငျဆိုငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
သရုပ်ဆောင် ကျော်ကျော်ဗို အတွက် စိန်ခေါ်မှုများစွာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ “Memories Of Tomorrow’’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး
မိန်းကလေးတွေပညာရေးအတွက် ယူနက်စကိုနဲ့ ပူးပေါင်းမယ့် Wanna One အဖွဲ့